မစ္စSherlani Jane Fanari သည် ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး၊ သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့် ကလေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူ အီတလီတွင်နေထိုင်ပါသည်။ သူမသည် FBSနှင့် မေလ၊ ၂၀၁၈ထဲက ရောင်းဝယ်ခဲ့ပြီး "စိတ်ကူးအိပ်မက်များဖြစ်လာပြီ"ပြိုင်ပွဲတွင် သုံးကြိမ်မြောက်ပါဝင်ခဲ့ကာ - နောက်ဆုံးအကြိမ်သည် ကံထူးချိန်ဖြစ်သွားပုံရပါသည်! ပရိဘောဂအစွပ်များ၊ ဝတ်စုံများနှင့် အရုပ်များချုပ်လုပ်ဖန်တီးနိုင်ရန် FBSကို အပ်ချုပ်စက်အသစ်တစ်လုံးနှင့် ချည်ထည်များတောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာ ဝါသနာသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး - သူမ၏ မိသားစုကုန်ကျစရိတ်တွေ ကာမိအောင်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်ရှိ သူမအမေအိမ် - ၂၀၁၃တွင် တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည့် အိမ်အဟောင်းကို ပြန်ပြင်ဆောက်နိုင်အောင် သူမချုပ်လုပ်ထားသောပစ္စည်းအချို့ကိုလည်း ရောင်းချချင်ခဲ့ပါသည်။
ပထမတော့၊ သူမကံထူးသွားတယ်ဆိုတာကို မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် FBS ကိုယ်စားလှယ်များက သူမအောင်မြင်မှုအတွက် အတည်ပြုလိုက်ချိန်မှာတော့ သူမပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ် - မစ္စ Fanariသည် ဒါဟာ သူမနှစ်သက်တဲ့အလုပ်ကို ဆက်လုပ်ရန်နှင့် သူမမိသားစု ချောင်လည်ရေးအတွက် ရှေ့ဆက်နိုင်မည့်အခွင့်အရေးအဖြစ်သုံးခဲ့ပါသည်။ သူမမိသားစု၏ စီးပွားရေးအခြေအနေကို မြှင့်တင်ရန် FBSနှင့်လည်းဆက်ရောင်းဝယ်ကာ၊ မိသားစုနှင့်မကြာခဏတွေ့ဆုံရန် ဖိလစ်ပိုင်ကို လာရောက်ရန်လည်း မျှော်လင့်ထားပါသည်။ "ဒီအံအားသင့်ဖွယ် ဆုလက်ဆောင်အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်! FBSကို သင့်အကျိုးဆောင်အနေနဲ့ရွေးလိုက်တာအတွက် သင်ဘယ်တော့မှနောင်တရမှာမဟုတ်ပါဘူး" -ဟုသူမက ပြောပါတယ်။
မစ္စ Fanari အားဂုဏ်ပြုပြီး၊ သူမနှင့် သူမမိသားစု ကံကောင်းပါစေဟု ဆန္ဒပြုပါတယ်!